နည်းပညာ - ၀က်ဆိုက်ရေးဆွဲနည်းလေ့လာခြင်း
ပထမဆုံး ဒီမှာ အရင်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကိုယ်အတည်ထောင်မယ့် အခမဲ့ဆိုဒ်ကိုထောင်လိုက်ပါ။ ခုဆို အခမဲ့ စနစ်နဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုတော့ထောင်ပြီးသွားပါပြီ။ ထုံးစံအတိုင်းအခမဲ့ဆိုတော့ အခပေးလို favicon , Custom Header, Password Protect တွေတော့ မရှိသေးဘူးပေါ့ဗျာ . . . ။ အဲ့ဒါအပြင် ကိုယ့်ဟာ အခမဲ့ဆိုဒ်မှန်းလူသိအောင်အောက်မှာ Createafree website with weebly ဆိုတဲ့ဟာကြီးကပါ ပါနေတော့ လူသိပ်အထင်မကြီးဘူးပေါ့ဗျာ . . . ။ အခပေးလုပ်တာရမှပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ကြပေါ့။
နမူနာအနေနဲ့ ကျွန်တော် အဲ့လိုထောင်ထားတဲ့ ဆိုဒ်လေးကို ဒီမှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ . . .။
အားလုံးအခပေးဆိုဒ်တွေကို အခမဲ့ထောင်နိုင်ကြပါစေဗျာ . . .။